Kedu ihe bụ CMP? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na C	» CMP
CMP bụ acronym maka Platform njikwa nkwenye.
Ngwá ọrụ na-eme ka ụlọ ọrụ na-erube isi na ụkpụrụ nkwenye nzikọrịta ozi dị mkpa, dị ka GDPR na TCPA. CMP bụ ngwá ọrụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị mbipụta nwere ike iji maka ịnakọta nkwenye ndị ahịa. Ọ na-enyekwa aka na ijikwa data na ịkekọrịta ya na ederede na ndị na-enye ọrụ email.